September 2020 - Nepali in Australia
काठमाडौँ – कोभिड–१९ को जोखिमकाबीच काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी तथा मानवीय चाप बढ्न थालेको छ । सवारीसाधान झण्डै साविकको तुलनामा बढी सञ्चालन हुन थालेको छ भने ट्राफिक जामसमेत बढ्न थालेको पाइएको छ । बाहिरी जिल्लाका सवारी आवतजावत बढेकाले पनि उपत्यकामा मानिसको आवागमनसमेत बढेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । सवारी भित्रिने क्रम बढेकाले मानिसको चहलपहलमा […]
September 27, 2020 October 9, 2020 adminLeaveaComment on अन्ततः असोज १६ गतेदेखि सबै विद्यालय खोल्ने निर्णय (सूचना सहित)
काठमाडौं । आउँदो असोज १६ गतेदेखि सबै विद्यालय खोल्ने निर्णय भएको छ ।गोकर्णेश्‍वर नगरपालिकाले असोज १६ गतेबाट नगरभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो ।
September 27, 2020 October 9, 2020 adminLeaveaComment on विवाहपछि चम्किन्छ यी राशी हुने व्यक्तिको भाग्य
प्राय:जसो मानिसहरु विवाह गरेपछि वा विवाह नहुनुअघि निकै नै फरक हुन्छन्। कुनै मानिस विवाह गरेपछि निकै नै खुसी हुन्छन् भने कुनै मानिस निकै नै निराश हुने गर्छन् । त्यस्तै नयाँ जानकारीको लागि यदि तपाईंको नामको अगाडीको अक्षर ही, हू, हे, हो, डा, डू, डी, डे वा डो आउँछ भने तपाईंको राशी कर्कट हो । यो […]
September 26, 2020 October 9, 2020 adminLeaveaComment on नेपाल टेलिकमले निकै सस्तो दरमा ल्यायो बालबालिका लक्षित निःशुल्क ‘पाठशाला सियूजी सिम’
ठमाडौं । नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’ बमोजिम विद्यालय जाने बालबालिकाहरुलाई आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गरी सिकाइमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउनका लागि नेपाल टेलिकमले निकै सस्तो दरमा सेवाहरु उपलब्ध गराउने भएको छ । यस अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास […]
काठमाडौँ- नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार भन्दा धेरै भए देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सक्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा पुन: लकडाउन गर्नुको विकल्प नहुने निष्कर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुगेको छ। यसको सङ्केत मन्त्रालयले तीन दिनअघि गरेको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा दिइसकेको छ। दशैँ, तिहार तथा छठ मुखमै आएको बेला महामारीका कारण फेरि लकडाउन […]
September 26, 2020 October 9, 2020 adminLeaveaComment on दुई दिन भित्र त’पाईं’को काम बन्नेछ ,बि’ल्कुलै बे’वास्ता न’गरि दे’ख्ने बित्तिकै ॐ लेखी से’यर ग’र्नुहोला अबस्य पढेर शिव भगवानको दर्शन गरौ
September 26, 2020 October 9, 2020 adminLeaveaComment on १८ महिनापछि राहुले ग्रहचक्रमा गर्यो ठूलो परिवर्तन, यी राशिको शुरु भयो शुभ समय !
२३ सेप्टेम्बर अर्थात् आज दिउसो १ बजेर ५ मिनेटबाट छाया ग्रह मानिने राहु वृष राशिमा प्रवेश गरिसकेको छ। राहु १८ महिनापछि मिथुन राशिबाट वृष राशिमा प्रवेश गरेको हो। राहुको राशि परिवर्तनले सबै १२ राशिमा प्राभाव पार्नेछ। मेष राशि राशिको धन भावमा राहुको प्रवेश तपाईंको लागि शुभ साबित हुनेछ। आकस्मिक धन लाभको सम्भावना रहेको छ। महँगो […]
September 25, 2020 October 9, 2020 adminLeaveaComment on होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ..
र्य खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने पूर्वीय समाजको मान्यता भएकाले धेरै शक्ति खेर जान्छ भन्ने सोच छ, तर त्यसमा सत्यता छैन। वीर्यमा प्रजनन क्षमताका लागि आवश्यक शुक्रकीट हुने भएकाले नै यसले बढी नै महत्त्व पाएको छ। सांकेतिक रूपमा हेर्दा जन्मको सुरुवात हुने बीजका रूपमा कार्य गर्ने भएकाले यसले पाएको महत्त्व जायज नै लाग्छ। यो शक्ति आफैंमा […]
काठमाडौं । भोलिदेखि फेरि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ ।बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले असोज ९ गते रातीदेखि १४ गते रातीसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि नगरपा लिकाले लकडाउनको घोषणा गरेको हो । बारबर्दिया नगरपालिकाको कोभिड संकट व्यव`स्थापन केन्द्रको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन अवधीभर सरकारी तथा […]